သဇင်(၃)သို့ | PoemsCorner
လေရူးရယ် . . .
နှင်းဦးရယ် . . .
ဟူး . . .( မောတယ်)
ရူးမိုက်မိုက် အကြံနဲ့ နင့်ကို ဘက်တိုက်
အလွမ်းမပြေသေးဘူးကွယ် . . . ။
In: ကဗျာ Posted By: mgchannaye Date: Sep 30, 2011
ဘုန်းနှင့်ကံနှင့် ရွှေသဇင် (ဦးတိုး)
Leave comment 30 Comments & 35,278 views
By: nwenyeinaye at Sep 30, 2011
By: sharon myorr myor at Sep 30, 2011
ဟုတ်ပ ဗျာ အလွမ်း ပြေတယ်ကိုမရှိပါဘူး
By: လုလင်ငယ်သွေး at Oct 1, 2011
By: May Kha at Oct 1, 2011
မင်းကဗျာက …ဘာမှမပေါ်လွင်သေးပဲနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလွမ်းနေရတာလဲ ။ကဗျာဆိုတာအထိန်အဝှက်နနှင့်အတိမ်အနက်ရှိရတယ်…၊ဆက်စပ်မှုရှိရတယ်..၊ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတာကဗျာမဟုတ်သေးဘူး…။ အဲဒီရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတာကို အင်္လာဝင်္ကဝုတ္တိတွေနှင့်အနုအလှသမုဒယတွေနှင့်အလှဆင်တတ်ရတယ်….။
By:ုkesareinda at Oct 2, 2011
kesareinda ပြောတာ ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀င်ဖတ်သွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါပေမယ့်ဗျာ တစ်ခါတစ်လေ ဒီလိုဖြစ်တတ်တာကိုများ သဘောပေါက်ပ မလားမသိဘူး
ကဗျာမှာ ဥပဒေတစ်ခုခု ရှိတယ်ဆိုရင်တောင်
အဲဒီဥပဒေက ကဗျာမှာ တသတ်မတ်ထဲဘယ်လိုရေး ရမယ်လို့ တိကျတဲ့အဆိုမရှိဘူးဆိုတဲ့ ဥပဒေပဲရှိလိမ့်မယ်လို့ ပြောကြတာ ကြားဖူးတယ်
ကျွန်တော်လဲ (ပြီးပြီးရော ရေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး)အဲဒီကဗျာမှာ အပိုဒ်တော်တော်များများ ဖျက်လိုက်ရလို့ပါ
By: mgchannaye at Oct 2, 2011
ကျွန်တော် နှစ်သက် မိပါ၏
By: အသဲကွဲ မိုး at Sep 26, 2012
By: ei lay at Sep 27, 2012
By: Than Aung at Sep 30, 2012
By: zawthetoo at Oct 1, 2012
နည်းမျိုးစုံဖြင့် အားပေးသော သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကျေးဇူးအထူးတင်ပါ၏
By: mgchannaye at Oct 1, 2012
ခင်ဗျားက အပြာကားတစ်ကား ကို အခြေခံဖွဲ့ထားတာပဲ
By: yaewintaung at Oct 4, 2012
သူတို့ မသိလို့ ဖြစ်မှာပါ။
By: kathitni1980 at Oct 19, 2012
By: kathitni at Oct 20, 2012
By: lovesaturn at Feb 3, 2013
By: သန့်စည်သူ at Feb 7, 2013
By:ိ်ဇေယျာဟိန်း at Apr 25, 2013
By: မေပျို at Apr 26, 2013
By: minkhant137960 at May 12, 2013
By: ei lay at May 12, 2013
သြော် … စကားပြေ နဲ့စကားပြောကို ရောထွေးနေအောင် ရေးသွားပြီး သူများကို လေကြီးလေကျယ် ဆရာဝင်လုပ်တဲ့သူတွေ လည်း ရှိသေးတယ် … ။ ဖန်တီးမှုအကြောင်း တော်တော် ပြောယူသွားရဲ့.. ။ ကိုယ့်စာ တစ်ကြောင်းကိုပဲ ကိုယ်က ဘယ်လိုရေးနည်းနဲ့ ရေးချင်တာလဲ ဆိုတာ သေချာစဉ်းစားပြီး ပြန် ဖန်တီးလိုက်ဦးဗျာ … ။ ခင်ဗျား Comment ကိုဖတ်မိတာ … မှား .. တယ် ….. ။
By: htoowai at Jun 6, 2013
By:ုကျော်ထက်အောင် at Jul 27, 2013
ဒီကဗျာကို အခုမှ ဖတ်မိတယ် သဇင်(၃)သို့ ဆိုတာ ဘာလဲဟင်
By: အေး at Sep 11, 2013
By: Lamimmay at Oct 8, 2013
share ပါရစေ …… 😀
By: may zune at Oct 8, 2013
By: kyi at Nov 4, 2013
အလွမ်းကမပြေ ကျွမ်းရလေတယ် အချစ်ဦးရယ်
နွေဦးဆိုတဲ့ အတိုင်း လေဗွေရိုင်းတွေကလဲ ဆော့ကနေကြတယ်..
ဒီရေလို့ အတသ်အကျများသပေ့ါ ရာသီဥတုရယ်…
By: မြတ်မြတ် at May 6, 2014
မောတယ် . . .
By: jaynile at Jul 17, 2015
By: မောင်မောင်လေး at Aug 1, 2015